Kuongorora kweBlog: Dave Woodson, Yemagariro Media Mubatsiri | Martech Zone
Chipiri, Gunyana 14, 2010 Chipiri, Gunyana 24, 2013 Douglas Karr
Dave Woodson mubatsiri wemagariro enhau uye matekinoroji anobatsira mabhizinesi nekuvapo kwavo online. Dave akaita ongororo huru yeiyo blogging bhuku isu takanyora ndokuzviisa pamusoro paBarnes naNoble. Sezvakavimbiswa, tiri kuita ongororo yeblog rake kuti tipe mhinduro dzinovaka kuti tune iyo! Izvi zvinoenda:
Hazvina kuoneka nekukurumidza izvo iyo chinangwa cheblog rako kune mushanyi mutsva. Ini ndaifanirwa kuenda kuNext kuti ndinyatsonzwa manzwiro ezvawanga uchibloga nezvazvo. Ini ndinokurudzira kuisa mutsetse kana katsamba kurudyi padivi rinotsanangura chinangwa cheblog rako.
Sezvo iwe uchibatsira mabhizinesi nevezvenhau uye tekinoroji, ini ndaikurudzira yakanaka kudana-ku-kuita (CTA) kumusoro kwekurudyi kwebara rako rerutivi pane peji rega rega uchiita kuti vanhu vazive kuti uripo zvekuhaya. CTA iyoyo inofanira kuendesa munhu kune peji rinomhara iro rine fomu yekubatana uye rumwe ruzivo rwekuwedzera pamusoro pevatengi uye masevhisi aunopa.
Iwe une musoro wakanaka uye logo ... tora logo uye woisa chiratidzo cheblog rako. Heino positi pane maitiro ekugadzira favicon.
Your Robots.txt faira iri mumudzi wedomeini yako uye ine iyo sitemap.xml nzvimbo yakanyorwa - ndizvo zvinotyisa! Ini ndaigadzirisa iyo faira ndorega traffic kune chero / wp- * dhairekitori kana faira - izvi zvinomisa injini dzekutsvaga kubva kunongedzera madhairekitori ako ekutonga.
Yako URL nzira (permalink) inoshamisa - zvinoita sekunge paine nhamba yekutumira iri mukati. Handifunge kuti zviri kukukuvadza, asi zvishoma quirky. Sezvo iwe usiri pachinzvimbo chepamusoro mune chero mhinduro dzekutsvaga (ini ndinoshandisa Semrush kuongorora), ini ndinogona kudhonza izvo, zvinotaridzika kunge spammy. Unogona kushandisa htaccess mitemo kuti uchinje iyo permalink. Chandinoda ndechekuti /% zita remazita% /. Maumbirwo e URL haachakoshese sezvaanga achiita, asi ndiani anoziva kuti ichadzoka riini!
Yako blog dhizaini inotyisa - zvakajeka uye zviri nyore kuona zvese. Ini ndinoda yako Apture bhar kuyambuka kumusoro, inonyatso cheka pasi pane yekuwedzera clutter mune peji.
Ndinoshuva dai pakanga paine chikuru mufananidzo zvako mumusoro. Vanhu vanofanirwa kuziva kuti Dave ndiani - uye pikicha yakanaka ichapa iko kubata wega kunovaka kuvimba uye kukuita kuti uoneke nevanhu vanogara pasi pabhodhi rako. Ndine pikicha yangu pese pese, kunyangwe pane yangu mabhizinesi makadhi. Kana mumwe munhu akatora kadhi rangu mavhiki mashoma gare gare, vanozorangarira kuti ndaive ani. Ini handizviite nekuda kwekuti ndinofunga ndakanaka;).
Zvako zvinyorwa zvakanyora-kunyorwa na nzvimbo huru pakati pendima uye mashandisiro ekushandisa zvinyorwa. Rondedzero dzinoshanda kwazvo pakunyora sezvo vanhu vachigona kuzviongorora zviri nyore. Ini ndinokukurudzira iwe kuti uwedzere yako font-saizi zvishoma uye shandisa zvakashinga uye iticic mazwi pane akakosha mazwi aunoshuvira kutyaira kumba nezvako zvemukati.
"Social Media & Tech" iri rakanyanya, rakapamhamha uye rinokwikwidza kiyi kiyi mutsara pane yako blog zita. Pane here niche iwe yaunogona kunongedza iyo yakatetepa uye yakati rebei refu-muswe? Nekunongedza marefu-muswe makiyi, iwe unogona kuwana akakodzera traffic nekukurumidza kubva mukutsvaga. Rimwe rakadai izwi ndere kushandisa pasocial media zvebhizinesi. Iyo inongowana chete nezve makumi matatu ekutsvaga pamwedzi, asi iwo makumi matatu evashanyi vatsva kune yako saiti mwedzi wega.
Unoenda zvishoma pamusoro pekugovana zvinongedzo. Ini pachokwadi handina kuona chero eiri basa kune chero bhizinesi parutivi kubva kuTwitter bhatani retweet (raunenge uinaro) uye Facebook yakaita sebhatani.
Iyo yekubatanidza kune yako kuonana peji yakavigwa mumenu yekufambisa. Ruzivo rwekufambidzana senge nhamba yefoni, kero, kana inosanganisirwa peji rekubatana nefomu inogona kuve nyore kuwana pane yega blog. Vanhu havatori nguva yekutsvaga panzvimbo ino ... kana vasingakwanise kukuwana, vanobva. Ini ndinokurudzira mamwe mabhizinesi kuisa iyo ruzivo pane yega yega musoro uye tsoka.
Mukana mukuru wandinoona kwauri ndewe kushandisa yako blog kumusoro uye nenzvimbo kukwezva mabhizinesi matsva. Nekutarisa kunharaunda yako uye kumira kunze semubatsiri wezvemagariro ipapo, unogona kutora mukana mukutsvaga mudunhu kubva kumabhizinesi ari kutsvaga rubatsiro rwako. Nekudaro, iwe unofanirwa kuve neshuwa kuti iwe unoshanda kufona-kune-chiito uye mapeji ekumisikidza munzvimbo kuti vagone kusangana nyore newe!
Ndatenda nemukana wekutarisa saiti yako! Uye ndinotenda zvikuru nekudzokororwa kwebhuku redu!
Sep 14, 2010 na10:29 PM
Sep 14, 2010 na10:45 PM
Ndatenda Doug, wakandipa runyoro rwakanaka rwekuwacha kuti ndishande pariri. Iri ndiro bhurogi rangu rekutanga randakamboita uye harina zvikonzero, asi inzvimbo yangu yekuyedza.
ndinokutendai nemaonero enyu echokwadi
Sep 14, 2010 na11:29 PM
Zvinotyisa kuwana zano rakadaro rinoshanda. Nzira yekuzviisa kunze uko kuti pakupedzisira ukure zvirinani. Ndinovimba ndinogona kukura kuva hip uye kutonhorera rimwe zuva.
Izvo zvinoshamisa kwauri kuti umuitire izvi Doug sezvandinoziva anozvitenda zvakanyanya. Ini ndinobvumirana nemoyo wese nezvakawanda zvaunotaura uye ndinongove neashoma "nitpicks" pachangu.
Ikozvino izvi hazvishande kune saiti yaDave sezvo mifananidzo yake kazhinji isiri yake asi kune vamwe ivo. Kune avo vari iwe haudi kuudza injini dzekutsvagisa kuti dziregerere zvachose yako wp-zviri mukati folda sekumisikidzwa kwemifananidzo kurodha kupinda mukati / wp-zvirimo/kurodha/ uye nemasaiti senge emukadzi wangu (iye muimbi, uye haana ' ndanga ndichizvichengeta kuti ndisagovane chikonzero anovenga pandinoita) kuwana traffic yakawanda kubva pakutsvaga mifananidzo. Padivi chinyorwa, handina chokwadi kana izvi zvachinja mune yese WP3 kana kungoita multisite yakagoneswa asi haicharatidzike kushandisa wp-zviri mukati zvakare (yangu chete WP3 setup ndeye yakawanda saka kwete 100%, kunyangwe kana kusimudzira kungave kwakasiyana zvakare. zvino kana vakaita zvakasiyana kusarudzika mune itsva, saka zvaizoda kuzvionera wega) asi kana zvashandurwa zvinogona kuita kuti iregedze zvese wp-
Tevere, um, wakamboona Dave here? Zvakanyanya, iwe unoda mufananidzo wake mumusoro? Uye iwe unofunga kuti zvinokwanisika kutora yakanaka? Dave? Hehehe, ndini mwana Daver. 😉
Ini pachangu ndinovenga mabhawa anoramba achibuda pamawebhusaiti, asi kubva pane zvandinowana ndiri mushoma. Chinhu chimwe chete ndechekuti ini ndinonyanya kufarira bara pane ino blog pane iri paDave's. Pazasi pacho pakabuda munzira uye inogara ichiratidza. Chero chero pandiine chimwe chinhu chinobuda kubva kumusoro chinovhara zvemukati ndinonzwa kuti chiri kuita chimwe chinhu chakaipa. Pamwe dai bhawa raigara riripo raizove nani nekuti waizongogadzirisa mupumburu wako kwairi, asi pazasi peji rine mukana mudiki wekupinda munzira. Kana ndikatsikitsira pasi kuti ndiverenge chinyorwa ini handidi kuti iwe uburitse bhara rinovharira mutsara wechibhakera kubva kwandiri, kana zvakanyanya kuipa chinhu chinovhara zvese zvirimo. Kunyangwe hazvo asina chivharo zvese uye ndokumbira kuti ndisaine bhokisi rake retsamba yetsamba, izvo ndizvo zvakaipisisa. 🙂
3000 yako yekugumira irikundiuraya 😉
Zvakanaka 2 mamwe mapoinzi andakakurukura naDave pamusoro peIM asi ndafunga kuti ndaizogovana pano.
Chekutanga ndicho chandinoziva kuti vanhu vanoenda nenzira mbiri. Ndinosarudza kusave nechinyorwa chizere papeji yekutanga. Kutanga iwe unowana iyo yekuwedzera Peji Yekuona kana izvo zvine basa kwauri, asi zvakare inokuzivisa iwe izvo mumwe munhu akawana zvinobata zvakakwana kuita zvakawanda nekudzvanya. Kana chinyorwa chakazara ipapo vaigona kuverenga 1 uye 4 ye5 iwe usingazvizive. Zvakare zvinoita kuti zvive nyore kuti mumwe munhu awane chinyorwa chinovafarira pasina kupuruzira mapeji kuti asvike kuchinyorwa chinotevera (zvinyorwa zvaDave hazvina kureba kudaro asi kana zvirizvo zvinogona kukonzera kutsamwisa uye vanhu kusasvika kuchinyorwa chavanoda. ) Asi ndinoziva kuti vamwe vanonzwa zvakapesana neizvi uye ichokwadi 50/50 yemunhu pref rudzi rwechinhu.
Chechipiri kuve neimwe mhando yemavara ekuenda nezvinotaurwa muvhidhiyo. Kusvikira Google iri kuverenga odhiyo kunze kwemavhidhiyo (uye liek unofanirwa kuvimba nazvo, wow yangu Google izwi shanduro ZVINONYANYA) uye nekuisa mumigumo yekutsvaga iwe unofanirwa chaizvo kuve nemapoinzi eVid akanyatso kuperengerwa muzvinyorwa. Nepo zvinyorwa zvizere zvingave zvakanaka ndinoziva kuti zvinorwadza asi kungowana rondedzero yemapoinzi makuru kunogona kubatsira. Mameseji aripo anobatsira asi ini ndinofunga zvimwe zvezviri muvhidhi zvinogona kubatsira zvakare.
Ndine urombo nekuwedzera ramble refu pa 🙂 uye zvakare mahombe kumusoro kwauri nekumuitira izvi.
Iyo chete yandingasundidzira kumashure ndeyekuita kuti vanhu vanyanye kuburikidza nechinyorwa, Richard. Iyi nzira ndeyechokwadi yeCPM (mutengo pachuru) nzvimbo uko vashambadziri vanopedzisa kubhadhara mapeji ekuona. Inzira yekuwedzera mapeji ekuona kwavo kuitira kuti vawane mari yakawanda… nemubhadharo wemuverengi.
Ini handisati ndaona humbowo kusvika nhasi hunoratidza kuti zvidimbu zvinofambisa traffic yakawanda kune saiti kana dhiraivha shanduko. Kusvikira ndazviita, handisi kuzozviita. 😎
Ibhurogi rakanaka, Dave! Usatarise rondedzero iyi seyakakosha, haina kurehwa nenzira iyoyo. Idzo dzese mhinduro dzinovaka dzinofanirwa kubatsira bhurogi rako kukura uye kuwana iwe bhizinesi!
Ndinofanira kubvumirana newe pakusava nemaonero akazara pane peji guru. Pfungwa dzangu dzinoti:
1.) Iwe unofanirwa kuve neyako inonyanya kufarirwa chinyorwa pane yako yekumberi peji mune chikamu chikamu. Aya ndiwo mapepa ako emari akaunza mari yakawanda kana hurukuro. Pane chikonzero nei iri yako inonyanya kufarirwa, pamwe nekuti yakanyorwa zvakanaka uye ine hukama kune vazhinji vashandisi. Saka wadii kuvanyengedza papeji rako rekutanga kunyangwe vangave vaine mwedzi kana miviri yekuzvarwa. Iwe haudi kuti vavigwe mukudya kwako kana vakakupa iyo yakanakisa kudzoka.
2.) Mamwe asara anofanira kunge ari snippets ezvitsva zvako kubva kufeed. Vanhu, IMO enda kupeji rekutanga kune yakajairika pfungwa yesaiti. Une 30 seconds kana zvimwe zvishoma kuti varambe vakatarisa. Saka kuva nezvigunwe uye zvimedu zvechifuyo chako zvinozobata vaverengi kutarisa pane chimwe chinhu. Kana iwe uine zvizere zvakatumirwa, ini pachangu kana ndisingade yako yekutanga yakazara post musoro saka handingazoenderera mberi nesaiti. Asi kana ndikakwanisa kuongorora nyaya dzichangoburwa uye mameseji mune snippets ndinogona kuona zvakawanda nezvesaiti uye zvakanyanya mukana wekuwedzera kudzika.
Ndiyo imwe yeaya makuru emhando dzenyaya dzegakava. Ini ndinoona kuti vazhinji vevanhu vanozviti "nyanzvi" kana "pro" mablogiki vanosarudza yakazara post post pane yekutanga peji.
Asi mukupindura doug: Ini handisati ndaona humbowo kusvika parizvino hwekuti maposita akazara anotyaira traffic yakawanda kune saiti kana dhiraivha shanduko. Kusvikira ndazviita, handisi kuzozviita. 😎
Sep 15, 2010 na3:39 PM
Ndinobvuma kuti kune vamwe imhando yeCPM yenyaya. Kwandiri kunyangwe ndichifunga kuti zvinobatsira kuona kuti inyaya dzipi dzakaverengwa nemuenzi kana zvichienzaniswa nekusaziva kana vaine hanya nekuverenga kana kuti kwete. Ini handina chekutendeutsa pachangu uye zvakanyanya kungoda kuziva kana munhu wacho anga aine hanya nazvo kuti aende kumberi kana chaizvo kana vasina hanya kuwana zvakawanda.
Chaizvoizvo inofanira kungoita iyo JS "kuwedzera" mhando yekuseta kuti vasvike pane iro peji, ona zvishoma chete kuti usarudze kana uchida zvimwe, asi wozowana yakazara chinyorwa ipapo uye ini ndinowana data randinoda. Izvo zvingave zviri nyore / zvakanakisa combo pane zvandinoda.
Awesome post! Inonakidza kwazvo uye inodzidzisa.